Semalt: Ahoana ny fanesorana ny fanadinana referendum? Easy Tips
Ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana dia lasa fihetsika isan'andro ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto. Ny fanesorana ity karazana fifamoivoizana ity dia tena ilaina amin'ny tompon'ny tranonkala tsirairay na ny mpandraharaha SEO. Ny fitaovana Google Analytics dia manana fomba maro hanesorana spam referrer ao amin'ny tatitra GA anao. Ny fifamoivoizana momba ny spam dia foto-kevitra tranainy amin'ny karazana mainty mainty moto . Ny olona dia mampiasa io fomba io handainga amin'ny mpanjifany amin'ny fametrahana haingana ny tranonkalany. Ankoatra izany, mety miteraka imasom-bava diso izy ireo, ka miteraka fatiantoka goavana amin'ny mpanjifa tsy misy ahiahy - antenne mikrotik. Ny fahatakarana ny spam fanamarinana dia tena ilaina amin'ny e-varotra rehetra.
Ny Nik Chaykovskiy, mpitantana ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt , dia mamelabelatra momba ny olana ara-pitsarana sasany amin'ity lafiny ity.
Fahatakarana ny fifamoivoizana
Ny fifamoivoizana referrer dia ireo mpitsidika izay mikitika rohy amin'ny tranokalanao amin'ny tranonkala hafa. Rehefa tranonkala mifandraika amin'ny tranokalanao dia misy fifandraisana mivantana eo amin'ny sehatr'asa, izay mety hitarika amin'ny mpitsidika tsy tapaka. Ohatra, afaka mandefa rohy mankany amin'ny tranonkalanao ianao avy amin'ny sehatra toy ny Site National Geographic. Ny fampahalalana momba ny sehatra dia ao amin'ny tranokalan'i Nat Geo satria lasa mpilalao Nat Geo ianao
Ny spam referral dia ny fifamoivoizana izay avy amin'ny sehatra izay mety tsy mampifandray amin'ny tranokalanao. Ny sasany amin'ireo tetika mety hahitana ny tena fitsidihana ara-dalàna avy amin'ny olona tena izy. Amin'ny tranga hafa, ny spam referrer dia manandrana manindry ny codecode GA misy anao amin'ny famoahana pejy fitsidihana izay diso..Amin'ireo tranga roa ireo, ny fitsidihanao GA dia manisy tsindrim-peo izay mety tsy voatery ho taratry ny mpitsidika anao. Amin'ny tranga marobe, ny spam referrer dia mety hitranga toy ny fitsaboana an-dalamby na mpitsikilo mpihazakazaka:
Antsoina ny mpanafika: bots voalohany izy ireo. Ny fifamoivoizana izay avy amin'ny bots raha toa ka tsy ara-dalàna. Tonga any amin'ny tranokalanao mandritra ny fotoam-pifanakalozana ara-dalàna izy ireo.
Fanondroana Ghost: Tsy mitsidika ny tranokalanao izy ireo. Na izany aza dia afaka mamitaka ny Google Analytics izy ireo amin'ny fisoratana anarana fitsidihana hosoka.
Ny tranonkala rehetra dia mila fitaovana manan-danja hiatrehana ny fifamoivoizana izay tsy avy amin'ny mpanjifa tena izy. Ohatra, sasantsasany amin'ny fitaovana izay ampiasain'ny webmasters hampiasana tolotra ho an'ny backlink dia afaka manampy ireo olona hanala ny spam referrer. Ohatra, afaka manaisotra sasantsasany amin'ireto ianao ao amin'ny takelaka fanovana admin
Ao amin'ny tabilao admin ianao, dia afaka manazava ny asa fanivanana ny bot ianao. Misy data momba ny spam ary spiders izay miezaka mikaroka vohikala noho ny antony samihafa. Ny fananganana filahiana an-tsoratra bot dia afaka manampy amin'ny fanajanona ny sasany amin'ireo loharanom-pifandraisana ireo izay mety tsy ho ara-dalàna. Ny sehatra sasany toy ny Semalt dia manana tantara malaza amin'ny fanipazana spam.
Ilaina ny fampiasana mailaka mpamatsy iray izay mpamatsy mailaka azo antoka dia afaka manofa fifamoivoizana amin'ny fijerena tranonkala. Afaka manao ny sehatra fitsangatsanganana manontolo izy ireo ary hiaro ireo mpanjifanao amin'ny fanafihana spam mety.
Ny olana momba ny spam dia olana goavana manoloana ny ankamaroan'ireo mpampiasa aterineto. Ny sasany amin'ireo latsa-bato mainty SEO dia mandrisika ny hampiasa ny tetika ara-pitenenana mba hanomezana valiny haingana. Tsy misy fotony noho io fampiharana io. Afaka miatrika sazy sasantsasany ianao rehefa miezaka mitana laharana amin'ny fifamoivoizana amin'ny spam. Ity toro-lalana ity dia afaka manampy anao hisoroka ny fifamoivoizana.